Borg : Talayaaniga lama mid ah Giriiga. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka maaliyadda Anders Borg. Sawirle: Janerik Henriksson/Scanpix
Borg : Talayaaniga lama mid ah Giriiga.
La daabacay onsdag 9 november 2011 kl 10.23
Wasiirka maaliyada ee dalka ayaa sheegay in dalka talayaaniga uu ka dabaalan doono mishaakilka dhaqaalaha ee heysta iyada oo dhibaatada dhaqaale ee talayaaniga ay horseeday habeenkii xalay ahaa in ra’iisal wasaaraha talayaaniga Silvio Berlusconi uu ballan qaado in uu ka degayo xilka ra’iisal wsaare ee dalkaasi.
Berlusconi ayaa keliya ka dhigay sharuud in marka hore baarlamanka dalkaasi uu meel mariyo sharciyada cusub ee isbedelka ee midowga yurub uu doonayo in lagu xaliyo mishaakilka deymaha ee talayaaniga.
Magaaladda Brussels ayaa waxaa xalay isugu tegay wasiirada maaliyada dalalka midowga Yurub ka hor inta uusan soo bixin warka ah in Berlusconi uu ballan qaaday in xilka uu isag degayo.
Anders Borg wasiirka maaliyada ee dalka ayaa hadal uu jeediyay ka dib markii la shaaciyay in Berlusconi uu ka degayo xilka ra’iisal wasaare ee talayaaniga waxuu ku sheegay in Talayaaniga uu u baahanyahay xasilooni xagga siyaasadda oo la amini karo.
Laakiin Aders Borg ayaa sheegay in Talayaaniga uusan la mid aheyn dalka Giriiga. Anders borg oo la hadlay tilifishinka SVT ayaa yiri: ’’ Talayaaniga waxuu heystaa fursado badan uu muuqda kuwaasi oo uu ku xalin karo mishaakilkiisa deymaha iyada oo aan la caawinin. Farqi weyn ayaa u dhaxeeya Talayaaniga iyo Giriiga dadka Talayaaniga waa dad u diyaarsan siyaasad mas’uuliyad xambaarsan.